लघुकथा : नागरिक अभिनन्दन
नीमा हो उसको नाम निमा ग्याल्जेन शेर्पा, पेसाले राजनीतिकर्मी तर नेता हुनुको दम्भ कहिल्यै देखिएन । बरु कसैले नेताजी भनी सम्बोधन गरे भन्थ्यो, कृपया ! मलाई लज्जित नबनाउनुहोला । नेता त ती मानिस हुन् जसले मेरो विचार मन पराए र मलाई सामाजिक कर्ममा लाग्न निरन्तर हौस्याए ।’ ऊ बोल्दै गर्दा उसका फूलजस्ता आँखामा नाचिरहेका थिए, उत्साहका अनगिन्ती पुतलीहरू । उसको निधारमा प्रस्ट देखिन्थ्यो, भूगोललाई भावनामा जोड्ने सपाट रेलमार्ग । त्यही लिक हुँदै कुदिरहेझैँ लाग्थ्यो विचारको छुकछुके रेल । अनि त्यही रेलमा सवार थियो ऊ स्वयम् र देशको भविष्य पनि ।
‘काम गर्ने वातावरण छैन, पूर्वाधार नै नभएपछि परिणाम कसरी देखियोस् त’ आम नेताकार्यकर्ताको भनाइ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ सर्वसाधारणको बुझाइ । ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन रहेछ’ नीमाको भोगाइ । ‘तँ आँट म पुर्याउँछु, हरेक रात सपनामा मेरो ईश्वरले यही भन्छ र सपना देख्न सिकाउँछ ।’ रहस्यको पोको फुकायो उसले । ‘म त निमित्त मात्र हुँ सबै भगवानको इच्छा र तपाईंहरूको सद्भाव,’ आफ्नो कर्मको भेटी, चढायो उसले जनता र जनार्दनमा ।
यतिबेला उसको अनुहार तलाउझैँ शान्त तर गम्भीर देखियो । आज अभिनन्दनका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो तर, उसलाई अभिनन्दनमा भन्दा काममा विश्वास थियो । आजसम्ममा के–के गर्न सकियो, के–के सकिएन ? समीक्षा गर्नु थियो ः भावीयोजनाका मार्गचित्र पनि तय गर्नु थियो । यी कार्यतालिका थाती राखेरै ऊ समारोहस्थलमा पुगेको थियो ।
खादा लगाएर स्वागत गर्न खोज्दा उसले नम्रतापूर्वक भन्यो,‘यसले मलाई घाँटीमा सकसक हुन्छ ।’ आयोजकले फूलमालाले स्वागत गरे । ऊ मुसुक्क मुस्कुरायो । साहित्यकार डा.न्यौपानेले गलामा बोधीचित्तको माला थपिदिए । ऊ गम्भीर मुद्रामा टोलायो । बिस्तारै उसका आँखा बुद्धका दुई सम्बोधी आँखामा लीन भए ।
नीमाले विश्वका थुप्रै उम्दा सहर घुमिसकेको छ । मानिस जतिसुकै आधुनिक होस् जतिसुकै समृद्ध बनोस् आफ्नो जाति, भाषा र संस्कृति हरेकलाई प्रिय हुँदोरहेछ । त्यसैले सभ्यताका कृत्रिम धरोहर खडा गरेरै भए पनि पहिचानमा जोड दिँदो रहेछ । हामी भने आफ्नै सम्पदा मास्ने खेलमा रमाइरहेका छौँ इत्यादि भन्दै गर्दा उसको अनुहारमा गहिरो विषाद देखिन्थ्यो । ‘यी सबै हाम्रै कमजोरीका उपज हुन्,’ ऊ भन्दै थियो, ‘जनताले राज्य हुनुको अनुभूति गर्नै पाएनन् । हामी उनीहरूका दुःखसुखसम्म पुग्नै सकेनौँ ।’ आफ्नो मन्तव्यमा उसले योजनाको कोरा सपना होइन : कामको बेलिबिस्तार लगायो, ‘हामीले नमुना विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ । संस्कृत, प्राकृत, अङ्ग्रेजीलगायत विभिन्न भाषामा पूर्वीय तथा पाश्चात्य कलासाहित्य र दर्शनको गुरुकुल सञ्चालन गरेका छौँ । जीवनोपयोगी शिक्षालाई निःशुल्क गरी यस ठाउँलाई शैक्षिक केन्द्र बनाउदै छौँ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाएका छौँ । कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक परामर्श र निब्र्याजी कर्जाप्रवाह गरेका छौँ । यस ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ विराट् हिमालय पदमार्ग निर्माण धमाधम भइरहेको छ । ठाउँठाउँमा मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद तथा गिर्जाघर निर्माण गरिएको छ । सबैले धार्मिक स्वतन्त्रताको भरपुर उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ । सूचना र प्रविधिमैत्री आदर्शग्रामले साकार रूप लिइसकेको छ ।’
अन्तिममा उसले सविनय आग्रह गर्यो, ‘अरू थुप्रै गर्न बाँकी नै होला, रचनात्मक सुझाबको अपेक्षा राखेका छौँ ।’ तालीको गडगडाहट सुनियो । नागरिक अभिनन्दनका क्रममा विनम्रतापूर्वक बोल्यो, ‘म सम्मानलायकै छैन । मैले होइन काम त मेरा साथीहरूले गर्नुभएको हो । हाम्रा लागि यो सम्मानजनक उपस्थिति र कामको अनुमोदन नै अभुतपूर्व अभिनन्दन हो । हामीलाई गर्ने अभिनन्दन सामाजिक सद्भावमा लगाइदिनुहोला ।’
शालीनतापूर्वक सबैलाई अभिवादन गरेपछि बिदा हुँदै गर्दा उसले भन्यो, ‘कृपया ! हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोला ।’